Nhau - Iyo Yakanyanya Kugumbusa
Mushure mekusiya gumi nematanhatu akaputirwa akazara neSlurpee pamberi pechigaro chemberi cheinopisa sedan, tinogutsikana kuti Hydro Flask 22-ounce tumbler ndiyo yakanakira vanhu vazhinji. Kunyangwe tichitambura kuburikidza ne112-degree kupisa, isu takawana iyo yekudzivirira kukosha pakati pevazhinji tumblers kune ese kuti abudirire (ivo vese vanogona kuchengeta chinwiwa chako chichipisa kana kutonhora kwemaawa mashoma). Kuita kweHydro Flask uye aesthetics zvinoita kuti ive inokunda.
Wedu wepamoyo tinowira Hydro Flask's 22-ounce. Kusiyana nehombodo yemvura kana thermos, iyo tumbler haisi yekukanda muhomwe. Iyo inochengetedza zvese kupisa uye kutonhora chete sekureba sekuda iwe kwaunoda kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe uye inoita kuti iwe usvinure zviri nyore paunenge uchifamba: ndiyo yekupedzisira mutyairi mudziyo.
Zvipuka zvishanu zvakamira panguva yedu yekutonhora kutonhorera kweSlurpee bvunzo, uye iyo Hydro Flask yaive mune iwo mashanu epamusoro. Uye zvakatora nzvimbo yechipiri mukuyedzwa kwedu kwekuchengetedza kupisa, kunoitwa nedhigirii rimwe chete mukushisa, saka zvichaita nyore kuti kofi yako ipise kwenguva yekufamba kwako. Asi aesthetics ndosaka vanhu vachida ichi chinhu. Takakurukura vanhu gumi nevaviri (kana kupfuura) pamusoro pekudya kwemanheru takakomberedza moto wemisasa, uye vese vakabvuma kuti Hydro Flask iri nyore kubata uye kufadza kupfuura chero yemimwe mienzaniso gumi nematanhatu yatakatarisa-uye izvi zvaikosha kune vanozvipira. Iyo Hydro Flask ine yakatetepa, inonyanya kushuvira chimiro chese mapopoma atakatarisa uye anouya mumasere anofadza mapfekete ehupfu. Isu tinosarudza avo kune iyo bani isina simbi-simbi inowira, nekuti idzo dzinopisa zvisina kugadzikana kune iyo bata kana ikasiiwa muzuva.
Hydro Flask inopa muvharo nehuswa hwakasanganiswa hweiyo 32-ounce uye 22-ounce shanduro dzeiyo tumbler. Takambozviedza pane iyo hombe vhezheni, uye inotyisa: yakachengeteka, nyore kubvisa uye kuchenesa, uye yakagadziriswa neyakagadziriswa silicone yekutaura yekudzivirira nyoro-palate jabbing.
Chekupedzisira, isu takatumira iyo email kubvunza kana yaive yekuwachira-yakachengeteka. Mhinduro yacho: “Kunyangwe iro rekuwachisa ndiro risingakanganise kuputira midziyo yemudziyo, tembiricha yakakwira pamwe nezvimwe zvinosukisa zvinogona kudzora jasi rehupfu. Saizvozvowo, kunyudza chirongo chako chose mumvura inopisa kunogona kuchinja poda yacho. ”
Post nguva: Nov-04-2020